Roobabkii ugu dambeeyay ma xalliyaan dhibaatada abaarta | Saadaasha Shabakadda
Roobabkii ka da'ay Spain toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa u adeegay inay xoogaa soo ceshadaan heerarka kaydadka ee guud ahaan Jasiiradda. Si kastaba ha noqotee, xitaa ma dhawa, xoog leh oo yareyn kara dhibaatooyinka abaaraha.
Ma rabtaa inaad ogaato sida heerarka kaydku u kordheen iyo isbarbardhiga waxa ay tahay inaan helno?
1 Wadarta abaarta
2 Yaraanta biyaha
3 Adeegsiga kaydadka iyo roobka
Abaarta Spain lama arag ilaa 1995 taas oo baraagaha Spain oo dhan ay gaareen celcelis ahaan 34%. Sannadkan 2017-ka ayaa lagu xirayaa boos celin by Caweyska Dalmar, ka dib saddex toddobaad oo isku xiga daadad. Daadadkani waxay ka caawiyeen kaydadka inay xoogaa ka soo kabtaan, laakiin ma yareeyaan abaarta daran ee ku habsatay Spain.
Wadarta mugga biyaha maanta ku keydsan dalka Spain waa 21.391 hektar oo cabir ah. lacagtan ayaa aad uga fog celceliska tobankii sano ee la soo dhaafay, taas oo ah 31.691 hektar oo cabir ah.
Heerarka kaydka ma yarayn tan iyo 1995, markay gaareen 34,71% awood. Xaaladda markan waxay si gaar ah u saameyneysaa qaar ka mid ah dooxooyinka waqooyi-galbeed, sida Duero, oo ku taal 31,38% (heer aan la arkin wax ka badan 30 sano) ama Segura, oo ah 14,11 , XNUMX%, taas oo ah tan ugu walwalka badan.
Waad ku mahadsantahay roobka toddobaadyadan ay kordhiyeen, gaar ahaan xisaabaadka qaarkood ee woqooyiga jasiiradda ku jira xaalad aad u xun. Qaarkood sida Bariga Cantabrian, oo ah 90,41%, Galbeedka Cantabrian, oo ah 61,20% iyo Miño-Sil, oo ah 44,22%.
Xogta Wasaaradda Beeraha iyo Kalluumeysiga, Cuntada iyo Deegaanka oo maanta la yaqaan, ugu dambeysay sanadkii 2017, ayaa muujineysa in wabiyada leh biyo yaraanta ugu weyn ay weli yihiin kuwa Segura, oo ah at 14,11%; tii Júcar, 25%; Dooxada badda Andalusiya, 30,58%; Duero, oo ah 31,38%; iyo Guadalquivir, oo ah 31,69%.
Dooxada Segura ayaa ah tan ugu welwelka badan heerarkuna ma ahan kuwo aad u hooseeya in ka badan toban sano, markay gaareen 14,26%. Heerarka 'Júcar' sidoo kale aad ayey u hooseeyeen, in kasta oo ay sidoo kale ku jireen abaartii 2007, oo gaarey 20,02%.
Heerarka ka hooseeya 50%, wabiga Mi -o-Sil (44,22%), Galicia Costa (46,64), Duero (31,38), Tajo (37,40), Guadiana sidoo kale sanadka way xirmi doonaan. (44,04), Guadalete (38,82), Guadalquivir (31,69), dooxooyinka badda Andalusiya (30,58), Ebro (48,91) iyo gudaha Catalonia (45,79).
Sidaan ognahay, woqooyiga Spain ma saameyno abaarta, maadaama heerarkeedu ka sareeyo: Bariga Cantabrian, oo sannadka ku dhammaan doona heerarka 90,41; Galbeedka Cantabrian (61,20); kaydadka Waddanka Basque (80,95), iyo kuwa Tinto Odiel iyo Piedras (oo ah 69).
Haddii aan dulmar guud ku sameyno dhammaan keydadka ku jira Spain, waxaan helnaa boqolkiiba 38,15% marka loo barbardhigo sanadkii hore, taasoo sanadka ku xirtay 51,1%. Sidaan aragno, sanad walba abaartu way sii shaac badashaa oo waxay noqoneysaa mid qatar badan, marba haddii lamadegaanku sii kordhayo.
Adeegsiga kaydadka iyo roobka
Waxaa jira laba nooc oo adeegsi ah oo la siiyo kaydadyada: kuwa loo isticmaalo istcimaala (kuwa loogu talagalay bixinta dadweynaha) iyo kuwa lagu abuurayo korantada korantada (iyada oo loo marayo biyo-dhaca)
Kaydadka isticmaalka ee wax cuna Waxay 33,3% ka fogyihiin tiradii sanadkii hore oo ahayd 58,1%.
Dhinaca kale, kaydadka loo isticmaalo dhalinta tamarta korontada waxay gaarayaan 49%, marka celcelis ahaan shantii sano ee la soo dhaafay ay ahayd 62,2%.
Roobabkii ugu dambeeyay waxay saameeyeen ku dhowaad dhammaan Isbaanishka oo gacan ka geysanaya kordhinta heerarka kaydadka, laakiin sida ku xusan saadaasha ma noqon doonaan kuwo ku filan yareynta dhibaatooyinka abaarta, oo sii kordheysa xagaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Roobabkii ugu dambeeyay ma xalliyaan dhibaatada abaarta